I-1914 — Ukuhambisa I-Linchpin - I-Beroean Pickets - Ukubuyekezwa kweWebhu.org
by UMeleti Vivlon | Aug 27, 2012 | 1914 | 1 amazwana
USir Isaac Newton washicilela imithetho yakhe yokunyakaza namandla adonsela phansi emhlabeni wonke ngasekupheleni kweminyaka yama-1600. Le mithetho isasebenza nanamuhla futhi ososayensi bayisebenzisele ukufeza ukukhonjwa okukhomba kweCuriosity rover eMars emasontweni amabili edlule. Sekungamakhulu eminyaka, le mithetho embalwa yavela ichaza konke esingakubona ngokuhamba kwezinto endaweni yonke. Kodwa-ke, njengoba izinsimbi zethu zathola izimbobo ezibucayi zaqala ukuvela ekuqondeni kwethu. Isibonelo, kwakukhona ukuphazamiseka okungaqondakali emzileni weMercury ezungeze ilanga okwakungachazwa kusetshenziswa i-Newtonian physics. Ososayensi badideka amashumi eminyaka kuze kube yilapho umabhalane osemncane wehhovisi lobunikazi efika nombono onamandla. Washiya konke ukuqonda, wabhala ukuthi mhlawumbe isikhathi kwakungeyona into engaphenduki ebesikade siyithatha. Isikhathi singancipha. Ukushintsha leyo nto esilinganisweni kusho ukuthi enye into kufanele ilungiswe. Uphethe ngokuthi ijubane lokukhanya emgodini ngeke likwazi ukushintsha. Lokhu ekugcineni kwaholela kwifomula edume kakhulu emlandweni: E = mc2. Indaba ingaguqulwa ibe amandla. Inani elincane lendaba elangeni beliguqulwa libe ngamandla aguqule amandla adonsela phansi eLanga athinta umzila weMercury. Ngokungazelelwe, umhlaba waba nomqondo futhi — okwesikhashana, okungenani.
Konke lokhu kanye nenkathi yenuzi yokuqalisa, ngoba kwashintsha isakhiwo esisodwa.
Uma ulandela le nkundla, kungenzeka ukuthi uyazi ukuthi ababambiqhaza bayo abasasemukeli ukubaluleka kwesiprofetho kwe-1914. (Bheka Ingabe i-1914 yayiyisiqalo sobukhona bukaKristu? ngemininingwane.) Njengoba u-1914 ubaluleke kakhulu ekuchazeni kwethu okuningi okungokwesiprofetho, kulandela ukuthi ukuguqula lesi sisekelo esisodwa kungashintsha konke. Ngamafuphi, u-1914 uyisixhumanisi. Njenge-linchpin yangempela, inkolelo yethu ku-1914 njengesiqalo sokuba khona kukaKristu ibeka isakhiwo sokuhumusha sokuqonda kwethu zonke iziprofetho zezinsuku zokugcina. Adonse leyo phini amasondo aqhamuke.
Mhlawumbe sekuyisikhathi sokudonsa leso sikhonkwane.
Kokuthunyelwe okwalandela, sizodlula Isambulo Umvuthwandaba incwadi ngenhloso yokuhlola zonke izincazelo ezingokwesiprofetho esizixhumanise no-1914. Njengoba ufunda lokhu okuthunyelwe, uma uzizwa sengathi asisekho nganoma iyiphi indlela, sicela ukhululeke ukuphawula. Inhloso yalesi sithangami akukhona ukonakalisa inkolo yanoma ngubani, kepha kunalokho ukufinyelela ekuqondeni okujulile nokunemba ngokwengeziwe kwemiBhalo. Siyakwamukela ukufaka kwakho.
← Ikhandlela lebhayibheli nathiUsuku lweNkosi nango-1914 →
Lokho kuzoba inselele enkulu ukwehlukanisa izikhombo zango-1914. Zonke izinhlelo zokusebenza ze-1918 kanye no-1919 zixhomeke kulolo suku olubalulekile futhi. Ngokubala okusheshayo kuvela ukuthi kunezinombolo ezilandelayo ezifakiwe zalowo nalowo encwadini yeSambulo: 1914: - 102 1918: - 55 1919: - 78 Ngokuthakazelisayo lapho ufunda le ncwadi iyonke kubonakala sengathi izinto ezilindelwe ikusasa eliphathelene neBabiloni Elikhulu, i-UN kanye nohulumeni bezwe kusabonakala kunengqondo. Ubuningi bezinto ezibonakalayo ezizama ukwenza okuningi... Funda kabanzi "